Maka: khokha ngokuchofoza ngakunye » Martech Zone
Maka: khokha ngokuchofoza ngakunye
Amagama Wokumaketha Aku-Inthanethi: Izincazelo Eziyisisekelo
Lwesibili, Disemba 15, 2020 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi singene shí kangakanani ebhizinisini bese sikhohlwa ukunika othile isingeniso kumatemu ayisisekelo noma ama-akhronimi azungezayo njengoba sikhuluma ngokukhangisa online. Ube nenhlanhla ngawe, uWrike uhlanganise le infographic ye-Online Marketing 101 ekuhamba kuwo wonke amagama asemqoka wokumaketha owadingayo ukuze ubambe ingxoxo nochwepheshe wakho wokumaketha. Inxusa Lokumaketha - Ithola abalingani bangaphandle abazomaketha lakho
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Akungabazeki ukuthi noma ngubani ovakashela isiza sami akaboni ukuthi ngenza imali ngaleli sayithi ngeGoogle Adsense. Ngikhumbula okokuqala ngizwa i-Adsense ichazwa, lo muntu wathi kwakunguWebmaster Welfare. Ngijwayele ukuvuma, ayikhokhi nezindleko zami zokubamba. Kodwa-ke, ngiyakwazisa ukukhipha izindleko zesiza sami futhi i-Adsense ibhekiswe kahle endleleni yabo ngezikhangiso ezifanele. Lokho kusho, isikhashana emuva ngilungise izilungiselelo zami ze-Adsense
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu U-Adzooma uzakwethu we-Google, iMicrosoft Partner, ne-Facebook Marketing Partner. Bakhe ipulatifomu ehlakaniphile, esebenziseka kalula lapho ungaphatha khona i-Google Ads, Microsoft Ads, kanye ne-Facebook Ads maphakathi naphakathi. I-Adzooma inikeza zombili isisombululo sokuphela sezinkampani kanye nesisombululo se-ejensi sokuphatha amaklayenti futhi sethembekile ngabasebenzisi abangaphezu kwe-12,000. Nge-Adzooma, ungabona ukuthi imikhankaso yakho isebenza kanjani shazi ngamamethrikhi abalulekile afana ne-Impressions, Click, Conversions
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Umbuzo engisabuzwa ngawo ngabaninimabhizinisi asebekhulile ngukuthi kumele bakwenze noma cha ukumaketha i-pay-per-click (PPC) noma cha. Akuwona umbuzo olula yebo noma cha. I-PPC inikeza ithuba elimangazayo lokucindezela izikhangiso phambi kwezithameli kusesho, kwezenhlalo nakumawebhusayithi ongahle ungafinyeleli kuwo ngezindlela zemvelo. Kuyini ukumaketha kwe-Pay Per Click? I-PPC iyindlela yokukhangisa online lapho umkhangisi akhokha khona a
Isikhathi sokufunda: 6 imizuzu Kulo nyaka ngenze imisebenzi embalwa yokuvelela. Enye kwakuyingxenye yokuthuthuka kwami ​​kobungcweti, ukufunda konke engingakufunda ngobuhlakani bokufakelwa (i-AI) nokumaketha, kanti enye igxile ocwaningweni lwendabuko lobuchwepheshe besikhangiso lwangonyaka, ngokufana nalokhu okwethulwe lapha ngonyaka odlule - i-2017 Native Advertising Technology Landscape. Ngangingazi ngaleso sikhathi, kepha i-ebook yonke yaphuma ocwaningweni olwalandela lwe-AI, "Konke Okudingayo
1 2 ... 6 Okulandelayo →
Ikhasinkomba 1 of 6